LED Batten မီး
LED Tri-proof မီး
ပလပ်စတစ် Tri-proof Light
အလူမီနီယမ် + PC Tri-proof Light
LED Panel မီး
LED Panel Frame ၊
LED Highbay Light ၊
အလုပ်သမားနေ့ အားလပ်ရက် သတိပေးချက် 2022
admin မှ 22-04-25 ရက်နေ့တွင်
ချစ်လှစွာသော Customer ။Eastrong Lighting တွင် သင်၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုနှင့် ယုံကြည်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။အစိုးရ၏ အားလပ်ရက်အချိန်ဇယားအရ၊ 2022 ရှိ အလုပ်သမားနေ့အားလပ်ရက်သည် 2022 ခုနှစ် မေလ 1 ရက်နေ့မှ မေလ4ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့် သင့်မိသားစုအား ငြိမ်းချမ်းပြီး ကျန်းမာသော အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။Eastrong (Dongguan) Lighti...
မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်အလင်းရောင်အတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် LED မီးလုံးများကို အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသနည်း။
လက်ရှိတွင် မြေအောက် ဂိုထောင်များစွာနှင့် ကားပါကင် မီးအလင်းရောင် အရင်းအမြစ်သည် အခြေခံအားဖြင့် သမားရိုးကျ မီးအလင်းရောင် နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ပါဝါသုံးစွဲရုံသာမက ဆုံးရှုံးမှုလည်း ကြီးမားကာ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းမှာ အခြေခံအားဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်သည် 24 နာရီ ဆက်တိုက် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လစ်
မီးလှပ်စက်များကို အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်း
အဝေးထိန်း မီးတင်စက်ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလဲ။မြင့်သော မီးအိမ်များနှင့် မီးပုံးများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအား အသိဉာဏ်ကြွယ်သော မီးအလင်းရောင် ကိရိယာစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး အချို့သော အထူးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမြင့်ပိုင်းထိန်းသိမ်းမှုအားလုံးကို မြေပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်...
LED panel frame သည် မည်သည့်နေရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်လျော်သနည်း။
ဖောက်သည်များက ကျွန်ုပ်တို့အား မေးလေ့ရှိသည်- LED panel frames များကို ယေဘူယျအားဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။မင်းမှာ ဘာလို့ ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ စျေးကွက်တွေ ရှိတာလဲ။ယခု ကျွန်ုပ်အား မျှဝေပါရစေ- မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ဘောင်နှင့် အလွတ်ဘောင်များ အပါအဝင် LED အကန့်ဘောင်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါအချက်သုံးချက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အသုံးပြုပါသည်။ပထမအချက်က ဉာဏ်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်...
အသစ်ရောက်ရှိလာသော-IP54 LED BATTEN
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ကျွန်ုပ်တို့၏ IP54 LED batten သည် IP54 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော polycarbonate (PC) ရုပ်ထွက်နှင့် အလူမီနီယမ်အိမ်ရာအခြေခံ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော Eastrong အရောင်းရဆုံး IP20 LED batten ပစ္စည်းများ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။၎င်းသည် classic LED batten အသွင်အပြင်ကျန်ရှိပြီးအသုံးပြုရန်ပိုမိုသင့်လျော်လိမ့်မည်...
2022 နှစ်သစ်အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
အားလပ်ရက်- ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်၊ 2022 ~ ဇန်နဝါရီလ3ရက်၊ 2022 ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ~ Eastrong Team Eastrong (Dongguan) Lighting Co., Ltd လိပ်စာ အမှတ် 3၊ Fulang Road၊ Huang...
2022 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ LED စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေအပေါ် အခြေခံစီရင်ချက်
2021 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ LED လုပ်ငန်းသည် COVID ၏ အစားထိုးလွှဲပြောင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး LED ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှု စံချိန်တင်မြင့်မားခဲ့သည်။စက်မှုလုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် LED စက်များနှင့်ပစ္စည်းများ၏ဝင်ငွေသည်အလွန်များပြားလာသည်၊ bu...
Osram သည် 90CRI အလင်းရောင် LED များအတွက် ကွမ်တမ်အစက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။
Osram သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် emissive quantum dot နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို 90CRI အလင်းရောင်အကွာအဝေးတွင် LEDs များတွင် အသုံးပြုနေသည်။“'Osconiq E 2835 CRI90 (QD)' သည် မြင့်မားသောအရောင်ဖော်ပြမှုညွှန်းကိန်းများနှင့် ပူနွေးသောအလင်းအရောင်များတွင်ပင် ထိရောက်မှုတန်ဖိုးများကို အမြင့်အသစ်များသို့ တွန်းပို့သည်” ဟု ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ သိရသည်။"LED သည် လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်...
LED battens များသည် BATTEN luminaires များ၏ အနာဂတ်များလား။
မယ်ဇလီမီးတောက်များကို ယခု နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး မျက်နှာကျက်များနှင့် အခြားနေရာများအတွက် ကောင်းသောအလင်းရောင်ပေးစွမ်းသည်။၎င်းတို့ကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းက ၎င်းတို့ကို မီးချောင်း battens များဖြင့် ထွန်းညှိထားသည်။ပထမဆုံး မယ်ဇလီဖူးမီးတောက်က...
TrendForce ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LED အလင်းရောင်စျေးကွက် Outlook 2021–2022- အထွေထွေအလင်းရောင်၊ စိုက်ခင်းအလင်းရောင်နှင့် စမတ်အလင်းရောင်
TrendForce ၏နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာ “2021 Global Lighting LED and LED Lighting Market Outlook-2H21” အရ LED အထွေထွေအလင်းရောင်စျေးကွက်သည် အထူးကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်အတွက် ဝယ်လိုအားများလာသဖြင့် အလုံးစုံပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကာ LED အထွေထွေအလင်းရောင်၊ စိုက်ခင်းအလင်းရောင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များတွင် ကြီးထွားလာစေသည်။ .။
အမျိုးသားနေ့ အားလပ်ရက် အသိပေးချက်
အားလပ်ရက်- အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အမျိုးသားနေ့။Eastrong (Dongguan) Lighting Co., Ltd Eastrong (Dongguan) Lighting Co., Ltd လိပ်စာ အမှတ် 3, Fulang Road, Huangjiang T...
New Arrival-IP65 ပလပ်စတစ် LED Tri-proof မီး
ဖော်ပြချက် Mini ပလပ်စတစ် Tri-proof မီးသည် ချိတ်ဆက်နိုင်သော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး IP65 ရေစိမ်ခံကာ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သည်။၎င်းသည် ရိုးရာသုံးတိုင်မီးများကို အစားထိုးနိုင်ပြီး မြေအောက်ကားပါကင်နေရာများ၊ မြေအောက်ရထားဘူတာများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ မြေအောက်ဥမင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
အမှတ် 3၊ Fulang လမ်း၊ Huangjiang မြို့၊ Dongguan မြို့၊ Guangdong ပြည်နယ်၊ China 523587
LED Baten, LED Batten မီး, မယ်ဇလီအလင်း, မယ်ဇလီ LED, LED Panel Frame ၊, Surface Mount Frame ၊, LED Triproof Light ၊, Triproof Light
©မူပိုင်ခွင့် 20192022 : All Rights Reserved |Eastrong (Dongguan) Lighting Co. Ltd